Namatsy vola fanampiny 40 tapitrisa dolara ny IDA, sampana ao amin’ny Banky iraisam-pirenena, hisian’ny fambolena maharitra. Hatsaraina ny famatsian-drano amina velaran-tany volena any Andapa (Sava), Iazafo sy Soanierana Ivongo (Analanjirofo), Marovoay (Boeny) ary Bealanana (Sofia). Efa nahatratra 65 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola avy amin’ny Ida ao anatin’ny tetikasa PADAP (Projet d’agriculture durable par une approche paysage).
Be mpitsidika mpizahatany frantsay any Nosy Sainte Marie, nosafidin’ny masoivoho frantsay sy ny fikambanambe frantsay hampiana. Maro ny fanampian’izy ireo: fampitaovana, fanaovana fotodrafitrasa, hatramin’ny kolontsaina. Misy ny aro amin’ny Covid-19, tarihin’ny consul honoraire an’i Frantsa any an-toerana.
Amboarina ny lalana mampitohy an’i Mahambo sy Fenoarivo Atsinanana, ary Toamasina II, hisantarana ireo fitaovana nomen’ny fitondrana foibe. Lalana miantoka ny famoaham-bokatra rehetra, toy ny letisia, jirofo, lavanila… Mandray anjara amin’ny asa ny fokonolona. Hajariana ny tora-pasika any Mahambo ary hametrahana toeram-pivoahana ho an’ny daholobe.
Manentana any amin’ny faritra Sofia ny ATT (Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety) momba ny fampiasana ny RN 6, sy ny hisokafan’ny toby fiantsonana ao Bekotrobaka, Antsohihy. Manana masoivoho irao ao amin’ny faritra Sofia izao ny ATT, ka tsy any Mahajanga intsony ny fanomezana fahazoan-dalana mitatitra ho an’ny faritra Sofia.